Vonoan’olona tany Miarinarivo : Olona 5 voasazy 15 taona an-tranomaizina -
AccueilSongandinaVonoan’olona tany Miarinarivo : Olona 5 voasazy 15 taona an-tranomaizina
Naharitra roa andro be izao ny fihainoana ireo olona voampanga tamin’ny resaka famonoana vaviantitra iray tamin’ny fomba feno habibiana tany Ambohitratoandro Analavory, distrikan’i Miarinarivo, ny taona 2014. Ny alarobia lasa teo araka izany no fotoana nampakarana ny raharaha teny amin’ny lapan’ny fitsarana. Manoloana izany, olona folo no naseho teo anoloan’ny mpitsara.
Taorian’ny fiakaran’ny raharaha araka izany dia afaka noho ny fisalasana ilay zanakavavin’ity ramatoa namoy ny ainy, izay voalaza fa voarohirohy ho nandray anjara tamin’ny famonoana. Ny 5 izay mpiara-miasa aminy tamin’ireo no nahazo sazy 15 taona asa anterivozona, miampy fandoavana onitra 50 Tapitrisa Ariary. Ny ambiny kosa afaka noho ny fisalasana. Tsy afa-po tamin’ny didim-pitsarana ny fianakaviana mpitory, taorian’ny didy navoakan’ny mpitsara ity raharaha ity. Io no azo ilazana ny valim-pitsarana navoaka, izay efa nifanotofana ny fanatrehana izany tao amin’ny efitrano fitsarana. Nilaza ny hampakatra ny raharaha ny mpitory noho ny antony nahafahan’ireo voalaza fa tena atidoha.
Olona folo no nofonjaina tamin’ity raharaha ity. Isan’ny voarohirohy ho tompon’antoka tamin’izany ny zanakavavin’ny maty sy ny vinantony. Heloka niampangana azy rehetra moa ny famonoana ity ramatoa ity tamin’ny fomba feno habibiana. Teo ihany koa ny firaisana tsikombakomba tamin’ny fanafenana razana, izay efa roa taona sy tapany taty aorina vao hita ny razana.
Raha tsiahivina manana tany be sahabo 30ha ity ramatoa antsoina hoe Mama Jeanne ity, izay tao amin’io tany io ihany no nahitana ny fatiny. Nolazaina tamin’ny fihainoana azy ireo tsirairay fa antony namonoana ity farany dia noho fahamaikana handova ireo fanany, indrindra io taniny io. Rehefa nandeha kosa ny fikarohana dia voatondro avokoa ireo mpiara-miasa aminy, ary nanondro ireo namany. Rehefa nanaovana ny famotorana kosa ireo nahavanon-doza dia nidoboka am-ponja avokoa. Olona miisa telo hafa nandray anjara tamin’ity vonoan’olona ity kosa no mbola karohina rehefa notononin’ireto voampanga ireto nanoloana ny fitsarana. Valo izy ireo no tena niray tsikombakomba tamin’ity raharaha ity, izay tafiditra ho tena atidoha ny zanany vavy sy ny vinantolahiny, ary ny mpiambina azy sy ny mpamboly eo amin’ny taniny.